About Us - Shenzhen Sanhui Industrial Co., Ltd.
Shenzhen SanHui Industrial Co., Ltd waa warshad optics laanta iibka toos aasaasay 2018 ku yaalla Shenzhen.
Our warshad waa magaalada kunyang, magaalada Kunming, soo saaraha ugu weyn ee optics ee Shiinaha ( duurka habeennimo Digital ). Dhidibada loo aasay 2013 iyadoo 600 oo shaqaale ah, 10 khadadka-soo-saarka.
Inta badan diiradda on design, wax soo saarka iyo iibinta alaabta muusikada ah hortiisa indhaha, oo ay ku jiraan Night Vision Monocular, Night Vision Riflescope, imaging kulul iyo gashatid baaxadda. Mid kasta oo ka mid ah qaababka wax soo saarka ee Attam abuurka, tayada lagu kalsoonaan karo iyo xasiloonida sare.
Waxaan u qabanaysay baaxadda OEM / ODM binocular for magac caan ah sida Bushnell, Hawke muddo sanado ah oo u ururay waayo-aragnimo qani ah oo caan sare. Bilow ka 2015, waxaan Toosiyay istaraatijiyad suuqa in ay diiradda saaraan suuqa aragtida habeenkii, iyo in la abuuro noo gaar ah wax habeennimo brand '4NIGHT' ah.
Waxaa naga go'an in bixiya fasalka-koowaad dhammaan dhinacyada ganacsiga our in Carter baahida suuqa iyo macaamiisha.
More nagu saabsan eegto on our YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UC4uBx1ZJ6BFwdCEXs5go9Og?view_as=subscriber
HABEENKII DIGITAL WAJAHADDA VISION
Room 605, Bai Ruida Building, Bantian Street, Degmada Longgang, Shenzhen City, Gobolka Guangdong, Shiinaha